Ukhuseleko lweeAirtag ezandleni zabantwana ekuthethwa ngabo | Ndisuka mac
Ukhuseleko lwee-AirTag ezandleni zabantwana ekuthethwa ngabo
Iindaba zatsiba kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo kwimidiya eyahlukeneyo kubandakanya MacRumors Kwaye kukuba ukhuseleko lwezi AirTags zintsha xa zisezandleni zabantwana luyabuzwa kwaye konke kungenxa yokuba "kulula kangakanani" ukususa isiciko ukutshintshwa kwebhetri ye-CR2032 ngaphakathi. Kwaye sibeka into elula kwizicatshulwa kuba abanye abasebenzisi babonakala befumanisa kunzima ngakumbi kwaye abanye bancinci kancinci, nangona kulula kakhulu ukususa isiciko ukufikelela kwibhetri.
Oku kwenza Ivenkile yevenkile yokuthengisa, susa okwethutyana ii-AirTags ezishelfini zabo ngenxa yokhuseleko "oluphantsi" olunikezelwa yimveliso ngokuchasene nokuphathwa gadalala ngabantwana. Le tracker yeApple yasungulwa kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo kwaye nezigidi zabasebenzisi ezisezandleni zayo ayibonakali ikhuselekile ngokwaneleyo kubantwana kwaye balinde uvavanyo lokugqibela lweKhomishini yase-Australia kunye neKhomishini yabathengi ukuthengisa ezi AirTags kwakhona.
U-Apple, kwiingxelo eziya kwi-Gizmodo, uqinisekisile ukuthintela ukuba inkqubo yokutshintsha ibhetri ye-procesoAirTags sesona sizathu sokuba intengiso yase-Australia igqibe ekubeni isuse i-RetirarAirTags kwiivenkile zayo okwethutyana kodwa ezi ahlangabezana nazo zonke iimfuno zokhuseleko.
Ii-AirTags ziyilelwe ukuhlangabezana nemigangatho yokhuseleko lwabantwana kwilizwe liphela, kubandakanya i-Australia, ngokufuna inyathelo elinemigangatho emibini kunye nokuguqula indlela yokufikelela kwibhetri enokubuyiselwa umsebenzisi. Silandela ngokusondeleyo imigaqo kwaye sisebenza ukuqinisekisa ukuba iimveliso zethu ziyahlangabezana okanye zigqithile kwimigangatho emitsha, kubandakanya neelebheli zephakheji, ngaphambi kwexesha elifanelekileyo.
Kuyinyani ukuba ezi zixhobo azisongezi isikrufu sokhuseleko esithintela ukuvulwa kwekhava kunye nokufikelela okulandelayo kwibhetri yeqhosha le-CR2032, kodwa kuyabonakala ukuba iApple ayophulanga nayiphi na imigaqo yangoku kwaye indlela evulwe ngayo ayibonakali. Kulula nokuba kwinqanaba lokuba umntwana akwazi ukulivula. Ngapha koko, kubonakala kuyingozi ngakumbi kuthi ukubeka isixhobo ngqo emlonyeni ayizukususa ibhetri ...
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ukhuseleko lwee-AirTag ezandleni zabantwana ekuthethwa ngabo
Hayi, ii-AirTags azinokwabelana ngendawo kwiqela losapho
I-Apple Watch inceda ekuhanjisweni ngexesha lokuhamba ngenqwelomoya